Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny 2011 July 21
21 Jolay 2011
Tantara tamin'ny 21 Jolay 2011
Rosia : Sambom-pizahantany niteraka resabe
Eoropa Afovoany & Atsinanana21 Jolay 2011
Ny folakandron’ ny Alahady 10 jolay 2011, dia nitsimbadika teo amin'ny tohodranon'i Kouibychev tao amin'ny ony Volga ilay sambo fitsangatsanganana “Bulgaria”. Araka ny atontan'isa ofisialy, dia mpandeha 129 no mbola tsy hita popoka sy heverina ho natelin'ny rano. Matetika rehefa mandre loza sy voina tahaka izao ny olona dia mampahatsiahy ny toe-javatra...
India: Mombai Niaina Tontolo Andro Feno Horohoro
Azia Atsimo21 Jolay 2011
Androany hariva baomba telo no nifanesy nipoaka tao anatin'ny tsena fivarotana be olona mifamahoaho tao Mombai. Haingana ny famoahan'ny mponina ny vaovao any amin'ny fampielezam-baovao sosialy ary mifanolotra fomba hifanampiana. Tamin'io andro io no nahitanay ezaka matotra avy amin'ny mponin'ny aterineto izay nampiasa fomba fampitam-baovao toy ny Google sy Ushahidi...
Sao Tome sy Principe: Ho Famonjena Ny Kolotsaina Maro Sampana
Afrika Mainty21 Jolay 2011
Ny fankalazan'i Sao Tome sy Principe ny faha-36 taonan'ny fahaleovantenany, ny 12 Jolay, dia nahitàna hetsika ara-kolotsaina sy ara-pomban-drazana natao nanerana ny firenena. Sampannan-dalàn'ny kolotsaina nandritra ny taonjato maro io firenenq io, nitelinq karazana fomban-drazana samihafa hanjary ho tokana. Manampy amin'ny fandraketana ireo dihy nentin-drazana sy bilaogera; sady maneho ny...
Tonizia: Fanentanana ho Fanafahana An'i Samir Feriani Mpitsikera ny Governemanta
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana21 Jolay 2011
Ny vondron'ireo Toniziana bilaogera sy mafana fo dia nandefa fanentanana ho fanafahana an'i Samir Feriani, zokiolona manamboninahitra ambony teo aloha tao amin'ny Minisiteran' ny Atitany izay voafonja hatramin'ny 29 Mai 2011.